जेठ ८, २०७४ मगलवार ०२:१२:००
डा रुना झा, वरिष्ठ कन्सल्ट्यान्ट प्याथोलोजिष्ट (राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला, टेकु) स्वास्थ्य मन्त्रालयले देशभरमा रहेका र भविष्यमा स्थापना हुने प्रयोगशालालाई व्यवस्थित, मर्यादित र गुणस्तरीय बनाउन नयाँ निर्देशिका कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। प्रयोगशालाको नियमनका लागि छुट्ट...
जेठ १, २०७४ सोमवार २१:२५:०७
सुदूरपश्चिम (प्रदेश–७) मा मेडिकल कलेज स्थापनाको चर्चा जोडतोडका साथ चल्न थालेको अठार वर्ष भइसक्यो। हुन त सुदूरपश्चिममा मेडिकल कलेज स्थापनाको चर्चा चल्न थालेको दुई दशकभन्दा बढी भइसकेको छ, तर यसले व्यापकता पाएको भने २०५६ सालदेखि हो। भारत काञ्चिकामाकोटी पीठका शं...
चैत ९, २०७३ बुधवार १७:२६:००
नर्स प्रभा ज्ञवाली लुम्बिनी अञ्चल अस्पताल बुटवलमा नर्सिङ अधिकृतका रुपमा कार्यरत छिन्। ३६ वर्षको नर्सिङ करियरमा उनले धेरै आरोह अवरोह भोगेकी छिन्। नर्सिङ पेशालाई उनले धेरै नजिकबाट नियालेकी छिन्। नेपालमा नर्सिङ पेशा, नर्सहरुको अवस्था लगायतका विषयमा ज्ञवालीसँग स्वास्थ्यखबर संव...
फागुन २७, २०७३ शुक्रवार २०:०८:००
विश्व स्वास्थ्य संगठनले सन् २०२० भित्र विश्वबाट हात्तीपाइले रोग निवारण गर्ने लक्ष्य लिएको छ। सोही लक्ष्यअनुसार नेपालमा पनि सन् २००३ देखि हरेक वर्ष हात्तीपाइले रोग विरुद्धको निःशुल्क औषधि खुवाउने कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएको छ। यस वर्षको कार्यक्रम स्वास्थ्य मन्त्रालयले चैतमा सञ्चालन...
फागुन २६, २०७३ बिहिवार १६:११:००
मानिसलाई रोग किन लाग्छ ? रोग शरीरमा लाग्छ भन्ने आम बुझाइ छ । शरीर र मन अलग अलग हुँदैनन् । मानव शरीर त एउटा इकाइ हो । शरीर भन्दा पनि मन नै रोगको मुहान हो । मानिसको शरीर र मन जोडिएका हुन्छन् । मन नै स्वस्थ छैन भने जति उपचार गरे पनि रोग निको हुँदैन । मनमा नकारा...
फागुन २४, २०७३ मगलवार १५:५०:००
औषधि उद्योगीहरुले नेपाली औषधिलाई प्रोत्साहन गर्न औषधि व्यवस्था विभागले उचित भूमिका नखेलेको आरोप लगाइरहेका छन् । विभागले आयातमुखी प्रवृत्ति त्याग्न नसक्दा नेपाली उत्पादन सरकारी नजरबाटै हेलामा परेको उद्योगीहरुले सधैँ गुनासो गर्छन् । उद्योगीहरुले विभागसँग यस्तो दुखेसो कि...
फागुन १६, २०७३ मगलवार ०१:४६:००
स्वास्थ्य मन्त्रालयको बजेट सीमा (सिलिङ) आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा १० वर्षकै कम तोकिएको छ। किन हरेक वर्ष बजेटको प्रतिशत घटिरहेको छ? स्वास्थ्य क्षेत्र र स्वास्थ्य मन्त्रालय दुई फरक कुरा हुन्। नेपालको समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रमा कुल बजेटको लगानी कति भएको छ र स्वास्थ्य मन्त्रालयले कति पाएको ...
‘कि सम्बन्धन देऊ, कि ब्याज मिनाहा गर’
फागुन २, २०७३ सोमवार २१:०२:००
चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसदमा विचाराधीन छ । सरकारले डा. गोविन्द केसीसँग गरेको सम्झौता अनुसार यो विधेयक पारित नभएसम्म कुनै पनि मेडिकल कलेजले सम्बन्धन पाउने छैनन्। तर, विभिन्न स्वार्थ समूहको दबाबले विधेयक अगाडि बढ्न सकेको छैन। यसै सन्दर्भमा विधेयक पारित नभएर सम्बन्धन पा...
माघ १९, २०७३ बुधवार १६:२४:००
२०१९ सालमा स्थापना भई २०२६ सालमा बाल अस्पतालमा रुपान्तरण भएको कान्ति बाल अस्पतालले सेवा विस्तार गरिरहेको छ । बालरोग विशेषज्ञ डाक्टर उत्पादन, जटिल बाल रोगको उपचार र देशका अन्य भागमा पनि विशेषज्ञ सेवा विस्तार गरी तीन क्षेत्रमा कान्तिले आफ्नो दायरा बढाउने योजना बनाएको छ ...
‘हाम्रो जस्तो मुलुकमा स्वास्थ्य मन्त्रालय चाहिन्छ’
पुस २४, २०७३ आइतवार २१:५६:००
नयाँ संविधान जारी भएपछि मुलुकलाई संघीय ढाँचामा लैजान राज्य पुनःसंरचनाको काम सुरु भइसकेको छ । अन्य क्षेत्रमा जस्तै स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि सरकारले पुनःसंरचनाका लागि अध्ययन र गृहकार्य गरिरहेको छ । अब संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहमा पनि स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने निकायहरुक...
आइओएम सम्बन्धन दिने अवस्थामा छैन
पुस १७, २०७३ आइतवार १६:४२:००
वरिष्ठताक्रम मिचेर चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम) को डिन बनाएको विरोधमा डा. गोविन्द केसी अनसन बसेपछि डा. केपी सिंह डिनबाट राजीनामा दिन वाध्य भए। त्यसपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालयले प्रा.डा. जगदीशप्रसाद अग्रवाललाई डिन नियुक्त गर्‍यो। लामो समयदेखि मेडिकल शिक्षा सु...
पुस १३, २०७३ बुधवार १६:२७:००
डेभिड स्यान्डर्स स्कुल अफ पब्लिक हेल्थ, वेस्टर्न केप टाउन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक हुन् । उनी सन् १९९८ देखि २००९ सम्म सो युनिभर्सिटीको पब्लिक हेल्थका विभाग प्रमुख थिए । पब्लिक र प्राइमेरी हेल्थमा ३० वर्षदेखि कार्यरत उनी धेरै सामाजिक संस्थामा आबद्ध भएर स्वास्थ्यका मुद्दा उठाइरहे...
‘निजी अस्पतालको घाँटी थिच्ने काम भइरहेको छ’
मंसिर २६, २०७३ आइतवार १६:३३:००
नर्भिक अस्पतालका सञ्चालक वसन्त चौधरी भर्खरै एशोसियन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्च्यिुशन नेपाल (अफिन)को अध्यक्षमा दोस्रो कार्याकालका लागि चुनिएका छन् । निजी अस्पतालहरूले अहिले समस्यामा रहेको र यससँग लड्न ऐक्यबद्ध हुनुपर्ने भन्दै उनैलाई सर्वसम्मत गरेका हुन् । अफिनको नेतृत्व सम्हा...
आइओएम सुधारमा हातेमालो गरौं - डिन डा अग्रवाल
मंसिर २०, २०७३ सोमवार १४:४८:००
किन आइओएममा डिन नियुक्ती पटक पटक विवादमा आउने गरेको छ ? डा गोविन्द केसीले आफ्नो पहिलो अनशनदेखि पद्धतीको कुरा उठाँउदै आउनु भएको छ । सो पद्धतीमा सरकारले कि त सम्झौता गर्नु हुदैन थियो, सम्झौता गरेपछि त्यसलाई पालन गर्नुपर्छ । आइओएममा डिन नियुक्त गर्दा डा केसीले केही...
आँखामा लायन्स ब्रान्ड नै हो
कात्तिक २८, २०७३ आइतवार १६:०७:००
नेपालमा अहिले करिव ७ सय ६० लायन्स क्लब भैसकेका छन् । झण्डै २३ हजार लायनहरु छन् । लायन्स क्लबको नेटवर्क नेपालका ६९ जिल्लामा पुगिसकेको छ । लायन्सअन्तर्गत नेपालमा चारवटा डिस्ट्रिक छन् । लायन्स क्लबले स्वास्थ्यका क्षेत्रमा उल्लेख्य योगदान गर्दै आइरहेको छ । स्वास्थ्यका क्षेत्रमा लायन्सले...
‘अब वीर अस्पतालको साख फर्कनेछ’
कात्तिक २०, २०७३ शनिवार १८:०४:०५
देशको सबैभन्दा पूरानो अस्पताल वीरका कार्यकारी निर्देशकमा डा. भूपेन्द्रकुमार बस्नेत नियुक्त भएका छन् । मेडिकल अफिसरका रुपमा २०५६ सालमा वीर अस्पतालबाटै सरकारी जागिर सुरु गरेका उनले करिब ४ वर्ष झापामा समेत सेवा दिए । २०६४ यता वीर अस्पतालमा नै निरन्तर कार्यरत डा. बस्नेत ...
सुधारका लागि समयको सुविधा र धैर्यता छैन – स्वाथ्यमन्त्री (अन्तर्वार्ता)
असोज ३, २०७३ सोमवार १७:०८:००
स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापासँग अनिल न्यौपानेले गरेको कुराकानी तपाईंले स्वास्थ्य मन्त्रालय नै रोज्नुको कारण के हो ? आफैंले रोज्न पाएको पक्कैपनि मेरो पहिलो रोजाई उर्जा मन्त्रालय हुने थियो । उर्जा समितिमा बसेर काम गरेको हुनाले पहिलो दिनदेखि नै मलाई के काम गर्ने भन्ने कार्...
योजना कार्यान्वयन मेरो प्राथमिकता : डा. उप्रेती
भदौ ६, २०७३ सोमवार १४:३६:००
डा. सेनेन्द्रराज उप्रेती, सचिव, स्वास्थ्य मन्त्रालय लामो समयपछि स्वास्थ्य क्षेत्रले प्राविधिक विषयमा जानकार सचिव पाएको छ । तपाईंको प्राथमिकतामा के–के छन् ? स्वास्थ्य मन्त्रालयमा प्राविधिक स्तरका कामहरु बढी हुन्छन् । सचिवले गर्ने काम भने नीतिगत भन्दापनि प्रशासनिक प्रक...
‘गुणस्तरमा सम्झौताले औषधिमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा’
भदौ ५, २०७३ आइतवार २२:२६:३८
औषधि उत्पादनका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याएको देउराली जनता फर्मास्युटिकल लिमिटेडले स्थापनाको रजत वर्ष मनाएको छ । नयाँ प्रकारका औषधि उत्पादन, अनुसन्धान र बजार प्रवद्र्धनमा अग्रणी कम्पनीको २५ वर्ष जिम्मेवारी सम्हालेका कार्यकारी निर्देशक हरिभक्त शर्मासँग डीबी खड्काले...
अस्पतालको सेवा मलाई नै चित्त बुझेको छैन – विकास समिति अध्यक्ष
असार १७, २०७३ शनिवार ००:०८:५८
अस्पतालको सेवा तपाई आफैँलाई कस्तो लाग्छ ? कोशी अञ्चल अस्पतालको सेवा मलाई नै चित्त बुझेको छैन । अरुलाई त के बुझोस् । अस्पतालमा के–के समस्या देख्नु हुन्छ ? डाक्टरहरू पूरा समय अस्पतालमा बस्दैनन् । ढिलासुस्ती भयो, बिरामी बाहिर पठाउछन् भन्ने गुनासो सुनिन्...